Bonke oosomashishini kufuneka basebenzise ukuthengisa ividiyo ndiyavuma 100%! Ndineebhloko ezininzi ezigxininisa le ngongoma. Ayisiyiyo kuphela ukuba ukuthengisa ividiyo kunokuba yenye yeendlela zakho eziphambili zokubhengeza kodwa ukwazi indlela yokwenza kakuhle ezo vidiyo ukuze zityebe kumxholo kwaye zilungiselelwe i-SEO. ilungelo okanye iividiyo zabo kunye / okanye ishishini ngekhe libonwe. Isithuba esihle kakhulu kwintengiso yevidiyo!